२०७६ मंसिर १४, शनिबार
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । विदेशीहरु नेपालमा उतिकै घुम्न र रमाइलो गर्न मात्रै आउँदैनन्, उनीहरु यहाँको चालचलन, रहनसहन, संस्कृति, पुराना सभ्यता, ग्रामिण वातावरण, मानव र प्रकृतिवीचको सम्वन्ध र दैनिकीहरुको सुष्मा अध्यायन पनि गर्छन ।
विदेशीहरु उसै सिर्जनशील, नियमित र काममा दत्तचित्त हुन्छन् । उनीहरु समयको व्यवस्थापन गर्छन र थोरै समयलाई पनि सदुपयोग गर्छन । यसैको एक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ पुस्तकहरु ‘वनका आत्माहरु र फुच्चे तिब्बती गोठालो ।’
युरोप मुलुकमा वस्दै आएका मरिया एन्टोनी सिरोनीले लेखेका यी दुई पुस्तक हिमाली सभ्यता, हिमाली दैनिकी र यहाँको परम्परागत मान्यताहरुसँग जोडेर कथाको रुपमा प्रकाशन भएको छ । पुस्तकमा प्रसंग अनुसारको चित्रहरु कोरिएका छन् । त्यो कला अष्ट्रिया वस्दै आएका करेन डाइम्बर्जर र जाना डाइम्बर्जरले कोरेका हुन भने कथाको संकलन छिरिङ याङ्डजोमले गरेकी हुन ।
इको हिमालको सहयोगमा बज्र बुक्स ठमेलले कथाका यी पुस्तकलाई बजारमा ल्याएको हो । पुस्तक नेपालको हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्ने हेतुले प्रकाशन गरिएको हो । पुस्तकको मूख्य उद्देश्य बालबालिकाहरुले अंग्रेजी राम्रोसँग सिकून भन्ने छ भने पश्चिमामुलुकका पाठकहरुलाई हिमाली भेगकका मानिसहरुले भोग्दै आएको जीवन बारे छोटकरीमा भएपनि जानकारी दिनु रहेको छ ।
हामीले वन झाँक्रीको कथा सुन्दै आएका छौं । हाम्रो बालबालिकाहरुलाई पनि हामी वन झाँक्रीको बारेमा सुनाउँदै आएका छौं । ‘वन झाँक्री के हो ? यसले के गर्छ ? वनझाँक्री र मानववीचको सम्वन्ध के छ ? के साँच्चै वन झाँक्री हुन्छन् त ? वन झाँक्रीको प्रकृतिमा कस्तो अस्तित्व छ या छैन ? वन झाँक्रीले तन्त्र सिकाउने विधि के हो ? विकास निर्माण, जैविक विविधता र पारिस्थितीक प्रणालीसँग वन झाँक्रीको सम्वन्ध के छ ? विकास निर्माणले वन झाँक्री अर्थात वनका देवताहरुको अस्तित्वमा कस्तो असर पर्दैछ त ?’ भन्ने विषयमा कथानक रुपमा वनका आत्माहरु पुस्तकहरुमा सविस्तर प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल घुम्ने क्रममा संकलनले ओखलढुंगा जन्तरखानी गाउँका ङिमा शेर्पा र सार्की शेर्पासँग भेटेर यो कथाको पाण्डुलिपी तयार परेका हुन । ङिमा पथ प्रदर्शक हुन भने सार्की झाँक्री हो । उनीहरुले वन झाँक्री भेटेको र मन्त्र सिकेको प्रशंग यस पुस्तकमा पाइन्छ । पुस्तकले वन तथा वातावरण संरक्षण, पुस्तान्तरणका बारेमा सचेत गर्न खोजिएको छ ।
फुच्चे तिब्बती गोठालो
‘सोनाम नाम गरेको फुच्चे गोठालोको निरन्तरको प्रारर्थना, ध्यानबाट उनले भेडा चराउँदै गर्दा एउटा अद्भूत ध्वनी दिने ‘पुस्तकमा ताम्येन’ भनिएको ‘डम्ङ्याङ’ अर्थात टुंना प्राप्त गर्छ । त्यो बाजाको संगीतसँगै जीवजनावारको कुराकानी बुझ्ने क्षमता सोनाममा प्राप्त हुन्छ । यस्तैमा उनलाई गोठालोबाट मालिकले निकालि दिन्छ । उनले भेडा र पाठाका कुराकानी बुझ्छन् । राती बास वस्दा रुखमा बास बसेको कौवाको संवाद सुन्छन् र दरबारबाट वैद्य खोज्न हिँडेको घोडा र बछेडावीचको वार्तालाप बुझ्छन् । एवम् क्रमले दरबारमा रानीको कानमा पसेको माकुराको पनि कुराकानीलाई बुझेर बाहिर आउन संगीतमार्फत याचना गर्छन । र, अन्तमा सोनाम फेरि हिमाली लोकमै फर्किन्छ ।’ यो कथाले सामाजिक हित, निः स्वार्थ सेवा र स्थायित्वको सन्देशहरु बालबालिकाहरुले प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
ग्रामिण विद्यालयमा कथाको पुस्तक वितरण
माथिको दुईवटा पुस्तकलाई ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको विभिन्न विद्यालयमा निःशुल्क रुपमा वितरण गरेको छ । बालबालिकालाई अत्तिरिक्त क्रियाकलापमा सघाउन पुगोस् र अंग्रेजी बुझ्न समेत सहज होस् भन्ने हेतुले पुस्तक वितरण गरेको अभियान्त ङिमा शेर्पाले जानकारी दिए । ओखलढुंगाको शिवालय मावि छेर्मादिङ, थार्लि ंग गुम्बा आधारभूत विद्यालय र वन्दना सिंहदेवी आवि बाख्र्रेमा पुस्तक वितरण गरेको हो । त्यस्तै, सोलुखुम्बुको ढिकुर आधारभूत विद्यालयमा पुस्तक वितरण गरेको छ । त्यस्तै, यहाँका पुस्तकालयमा पनि यी पुस्तक पाइन्छ ।
रजिस्ट्रारलाई कुटेको आरोपमा उपकुलपतिमाथि छानविन शुरु
योद्धा बनिन् सनी लियोन
सय बढी शेर्पाले निवन्ध लेखनमा भाग लिए
लकडाउनको अवधि वैशाख २५ गतेसम्म